BRIDGERTON မှထွက်ခွာရန်REGÉ-JEAN PAGE နှင့် ပတ်သတ်၍ အကောင်းဆုံးမှတ်စုများကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည် - သတင်း
Bridgerton မှထွက်ခွာသွားသည့် Duke နှင့်ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးမှတ်စုများကိုယခုကျွန်ုပ်တို့သဘောတူလိုက်ပြီ
ဘဏ်ရုံးပိတ်ရက်တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာသတင်းဆိုးကိုကျွန်မတို့ခံခဲ့ရတယ် Duke of Hastings သည် Bridgerton ၏ရာသီ (၂) တွင်မဖြစ်နိုင်ပါ ။ ထို့နောက်တွင် Bridgerton အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုလုံးသည်တရားဝင်စိတ်မသာညည်းတွားခြင်းသို့ရောက်သွားသည်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် (kinda) နှင့်သဘောတူလက်ခံနိုင်ပြီးစီးရေမှစီးထွက်သောRegé-Jean Page ၏သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ရေငတ်။ ဆုံးဆုံးသောဝမ်းနည်းဖွယ်အမှတ်တရများကိုမျှဝေနိုင်သည်။
တွစ်တာတွင်ကြေကွဲဖွယ်ကောင်းသောသတင်းကို Netflix ကကြေငြာခဲ့သည်။ အချစ်ဆုံးစာဖတ်သူများသည် Viscountess ကိုရှာဖွေရန် Lord Anthony Bridgerton ၏ရှာပုံတော်ကိုကြည့်ပြီးအားလုံးသည် Duke of Hastings ကိုအောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့သူRegé-Jean Page နှင့်ယှဉ်ပြိုင်သည်။
ကျနော်တို့ရှိမုန်၏ရှေ့မှောက်တွင်မြင်ကွင်းပေါ်ရှိလက်လွတ်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူကအမြဲ Bridgerton မိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ လာမည့်လူမှုရေးရာသီနှင့်သူကမ်းလှမ်းနိုင်သည့်အရာများကိုသူမ၏အစ်ကိုအားကူညီပေးရန်ဒယ်ဖနီသည်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည့်ဇနီးမောင်နှံအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေ ဦး မည်။
ဒါကြောင့်ယခုငါတို့ကန ဦး ထိတ်လန့်ခြင်းမှပြန်လည်နာလန်ထူရန်အချိန်အနည်းငယ်ရှိပြီ ဖြစ်၍ Brégertonမှထွက်ခွာပြီးရာသီနှစ်ခုတွင်မပါဝင်သောRegé-Jean Page နှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးမှတ်စုများမှာဤတွင်ဖြစ်သည်။ ငါပြီးသားနောက်တဖန်ငိုတယ်။
1. ငါတကယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ ????
ငါသူ ... ဆွဲထုတ်သူပြောနိုင်ပုံပါဘဲ https://t.co/quNmFOnRX8
- hermione (@thorlokid) 21ပြီလ 2, 2021
3. ငါ ok အချိန်အနည်းငယ်လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့
Regé-Jean Page ကိုလုပ်ကိုင်ရန်ကြိုးစားနေသည့်အမျိုးသမီးများသည်ရာသီ ၂ တွင်ဖြစ်သည် #Bridgerton pic.twitter.com/76YZRZ7JDW
- S.B. (@theSheenaB) 21ပြီလ 2, 2021
4. မ WE ပါဘူး
Daphne လိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ adieu လေလံဆွဲ
ရီဂျင်းတစ် ဦး နေဆဲဖြစ်သည်
& အစ်မ, အောင်ပွဲခံ
- 𝒓𝒂𝒄𝒉𝒆𝒍ⁱˢᵃˢᵉᵇᵃˢᵗⁱᵃⁿ²×²ᵃᶜᶜᵒᵘⁿᵗ (@bloodyrachell) 21ပြီလ 2, 2021
ကျွန်ုပ်၏ခင်ပွန်း xx ကိုထောက်ပံ့ရန်မစောင့်နိုင်ပါ
Regé-jean စာမျက်နှာသည် bridgerton မှထွက်ခွာသွားသည်…နောက်လာမည့်ငါးနှစ်အတွင်းကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ရှိအကြီးမားဆုံးကြယ်များထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်လာသည်ဟုကျွန်ုပ်နားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။
- rachel syme (@rachsyme) 21ပြီလ 2, 2021
၆ ။ နောက်ထပ်စကားလုံးများ
သငျသညျ Rege- ဂျင်းစာမျက်နှာလွဲချော်ပါလိမ့်မည် ... ။ pic.twitter.com/tVrXIc27bM
- pjm fi nini (@jiminzstin) 21ပြီလ 2, 2021
၇။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တောင်းခံပါ x
ဒါပဲ။ ဒါကတွစ်တာပါ။ #regejeanpage pic.twitter.com/3WiZ3P8IJm
- pang (@pngth) မတ်လ 28, 2021
9. ဒီတော့ထူးဆန်း ?????? ကျွန်တော်စောင့်နေတယ်?????
Regé-Jean Page နဲ့ကျွန်မလက်မထပ်သေးတာကိုတကယ်ထူးဆန်းတယ် pic.twitter.com/veHTMqLdSH
- TV Fanatic⚜️ (vTvKhaleesi) မတ်လ 25, 2021
11. ကိုယ့် Lil နည်းနည်းစိတ်ပျက်စရာပေါ့
Regè-Jean Page သည် Bridgerton စီးရီး ၂ တွင်ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တိကျမှန်ကန်စွာရိုက်ကူးထားသောဓာတ်ပုံ pic.twitter.com/dG8aS8Ns2H
- • CLAIRE • (@ Cl4iREW00D) 21ပြီလ 2, 2021
မြည် ?? BRIDGERTON ၏2ရာသီမ ???
- Kendra Leigh (@ KendraS28_) 21ပြီလ 2, 2021
13. မင်္ဂလာပါ။ အမုန်းမုန်းတီးမှုရာဇ ၀ တ်မှုအကြောင်းသတင်းပို့ချင်ပါတယ်
ကျွန်ုပ်သည်Regé-Jean Page သည်ရုပ်ရှင်နှစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်နေကြောင်းသိသော်လည်း Duke of Hastings ကိုမမြင်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ pic.twitter.com/etfI46gJnL
- Fluff Daddy (@KeyKeyBoomBoom) 21ပြီလ 2, 2021
Rege-Jean Page သည်ရာသီ ၂ အတွက်ပြန်မလာကြောင်းတွေ့ရှိပြီးနောက် #Bridgerton pic.twitter.com/GBNfu6l8VY
- MelanatedMermaid🧜‍♀️ (@purple_byobow) 21ပြီလ 2, 2021
ငါတို့ Duke ထာဝရ #Bridgerton pic.twitter.com/9oUvXG2ChY
- အကောင်းဆုံးregé-jean စာမျက်နှာ (@bestofrjeanpage) 21ပြီလ 2, 2021
အလွန်အမင်းဝမ်းနည်း, စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်အမျက်ထွက်။ #Bridgerton pic.twitter.com/cLqTQnMCwL
- Chel ⁷ || RJP • PD Supremacy (@mschls) 21ပြီလ 2, 2021
၁၇ ။ ဒါဟာကျိန်းသေမဟုတ်ပါဘူး
Duke ၏ရာသီ2အတွက်ပြန်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းကြားပြီးနောက်ငါ၏အတုံ့ပြန်မှု #Bridgerton pic.twitter.com/a17YE0pPL9
- သင်ဝမ်းနည်းနေပါကကျွန်ုပ်၏နောက်သို့လိုက်ပါ (@kelvinellish) 21ပြီလ 2, 2021
Regé Page ထက် Simon Basset ကိုဘယ်သူမှပုံမဖော်နိုင်ဘူး။ သူကတကယ် Duke ရဲ့ဇာတ်ကောင်မှတရားမျှတမှုကိုပေး၏ကိုပြု၏။ ဒီအကြီးအသရုပ်ဆောင်မှပယ် ဦး ထုပ်။ @regejean
သင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သင်၏ဂရေ့စ်ကိုထပ်မံတွေ့မြင်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ #Bridgerton ❤️ pic.twitter.com/4y62baZMWP
- သမ္မတကတော်ခ။ #Bridgerton (@BridgertonNow) 21ပြီလ 3, 2021
s2 ၏ storyline သို့ RJP: pic.twitter.com/Whz2HcipEL
- စကားစပ်မှ Bridgerton (@BridgertonOC) 21ပြီလ 5, 2021
Shonda သူ Duke ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း #Bridgerton pic.twitter.com/zwk3nFXPhE
- Neena (@ NeenaQueen20) 21ပြီလ 5, 2021
21. Tbf သူအများဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်
ငါတို့ရှိသမျှကိုချစ်ကြပြီးနောက်Regé-Jean စာမျက်နှာ #Bridgerton pic.twitter.com/Rc4VhHWdwD
- Olivia Truffaut-Wong (@iWatchiAm) 21ပြီလ 2, 2021
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်အတွက် Viscount Bridgerton သည်အဆင်ပြေပါသည် pic.twitter.com/ge9BeFAGH3
- 𝓜𝓪𝓻𝓽𝓲𝓷𝓪𝓢𝓽𝓪𝓻𝓭𝓾𝓼𝓽☆ (@wRoNg_imagine_) 21ပြီလ 2, 2021
• Bridgerton ရာသီ ၂ ၏သရုပ်သဏ္charactersာန်တွင်ဇာတ်ကောင်အသစ် ၄ ခုထည့်သွင်းထားသည်
• Bridgerton နှင့်ပတ်သက်သောဤ TikToks သည်အလွန်ကောင်းသည် Duke သည်သူတို့အတွက်မီးလောင်သည်